कोरोना कहरमा धर्म संस्कारको ‘रङ नम्बर’
मनोज घिमिरे काठमाडाैं, ९ जेठ
३० वर्षअघिको कुरा । २०४७ को १ वैशाखमा म पुगेको थिएँ, सपनतीर्थ दर्शन गर्न । बागद्वारमा नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै रातको १२ बजे नुहाएर हामी हिँडेका थियौँ, सपनतीर्थतर्फ ।
मेरा अभिभावकसहित गाउँका थुप्रै मान्यजन हुनुहुन्थ्यो । जब सपनतीर्थ पुग्यौँ, त्यहाँ पानी फोहोर लाग्यो । सबैले नुहाए तर मैले नुहाइनँ ।
मेरा अग्रजबाट अनुशासनहीनको पगरी थमाइयो । मेरो मनमा फोहोर पानीमा नुहाउँदा कसरी धर्म ? भन्ने प्रश्न उब्जिइरह्यो ।
म आर्य संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु । अझ भनौँ, संसारको सबैभन्दा पुरानो विज्ञान वेद हो भनेर म पनि भन्छु । हामीले दुःख पाउनुका प्रमुख कारण संस्कृत भाषाको ज्ञानको कमी हो भन्ने पनि लाग्छ । तर, ३० वर्ष अघि जसरी थुप्रै प्रश्न मनमा उठ्न थालेका थिए, तिनको एउटा शृङ्खला नै बन्यो । यदि हामी सबै भगवानका सन्तान हौँ भने बलि प्रथामा देवी कसरी खुसी हुन्छिन् ? यसको उत्तर न मेरा अग्रजले आजसम्म दिए, न त याे प्रथालाई नै छाेडे ।
मान्छेमान्छेबीचमै कसरी भेदभाव ? कसैको मनमा चोट पुर्‍याउँदा कसरी धर्म हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ पनि मैले पाएको छैन । अमिर खान अभिनित फिल्म 'पिके'मा जस्तो समाजका धेरै यस्ता कुरालाई ‘रङ नम्बर’ ठहर गर्नुबाहेक अरु विकल्प मसँग छैन ।
आशय, कुनै धर्मलाई होच्याउने होइन, सम्मान नै गर्ने हो । तर, के साँचो हो भने तपाईं मुस्लिम, हिन्दु इसाई, बौद्ध या जेसुकै सम्प्रदायको हुनुहोस्, तपाईंको भूमिका जति धेरैका लागि हितकारी छ, तपाईं त्यति धेरै धर्मात्मा हो ।
तपाईंको जीवनशैलीले जति धेरैलाई हानि पुर्‍याउँछ, तपाईं त्यति धेरै पापी हो । तपाईंका कारण धेरैलाई हानि पुगिरहेको छ भने तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्नुस्, मस्जिदमा गएर रोजा पढ्नुस्, चर्चमा गएर बाइबल पढ्नुस् या छातीमा बुद्धको चित्र खोपेरै हिँड्नुस्, तपाईं अपराधी हो ।
तपाईंका कारण धेरैको ज्यान जोखिममा छ भने तपाईं अझ ठूलो अपराधी हो । अज्ञानताले भए कम, ज्ञान र शिक्षा हुँदाहुँदै हेलचेक्र्याइँ भए अझ भयङ्कर अपराधी हो भन्नेमा पनि शंका नगरौँ ।
यी सबै प्रसङ्ग कोरोना भाइरस संक्रमण र यसले निम्त्याउने कोभिड– १९ महामारीको प्रसङ्गमा जोडौँ ।
गोदावरीको एउटा कुनाबाट हेर्न भ्याएको नेपाली समाजको प्रसङ्ग पनि कोट्याऊँ । यो लेख तयार पार्दासम्म नेपालमा ४ सय ५३ संक्रमित भेटिइसकेका छन् ।
साँचो तथ्य के हो भने भारतमा यो संक्रमण फैलिनुमा धर्मको नाममा भएको गतिविधि पनि हो । पछिल्लो समय नेपालमा भएको संक्रमण भारतबाट आयातित भएका कारण यसको असर नेपालमा परिनै सकेकाे छ ।
नेपालमा संक्रमणको अवस्था हेरौँ । चैतको मध्यमा सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेश जोखिमपूर्ण मानियो । काठमाडौँ त मूलशहर जोखिम हुने नै भयो । काठमाडाैंपछि बाग्लुङ र सुदूरपश्चिममा संक्रमण देखियो ।
पर्सा र नेपालगञ्जको घटनाले के प्रमाणित गरेको छ भने डराइरहेको समयमा देखिएको संक्रमणभन्दा मान्छे ढुक्क भएको समयमा देखिएको संक्रमण धेरै घातक हुन्छ ।
हो, चैतको अन्त्यदेखि काठमाडौं उपत्यका अनुशासनहीन र मैमत्त भएकाे छ । यहाँका मानिस जति मैमत्त भए, राज्यको भूमिका पनि त्यस्तै रह्यो ।
काठमाडौंबाट मान्छे ओसार्ने र काठमाडौं भित्र्याउने दुवै काम गरियो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएको छ । धेरैको परीक्षण भएको छैन । संसारले के देखाएको छ भने यो संक्रमण नियन्त्रण गर्न कि कठोर सरकार र कि कठाेर प्रशासन चाहिन्छ, कि जिम्मेवार नागरिक चाहिन्छ, अन्यथा सम्भव छैन ।
यसको उदाहरण चीन र दक्षिण कोरियालाई मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ यी दुवै चिज छैनन् । यसकारण नेपालका अन्य क्षेत्रभन्दा काठमाडौं उपत्यका महामारीको उच्च जोखिममा छ भन्दा कुनै अप्ठेरो मान्नै पर्दैन ।
संसारमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भ्याक्सिन नबनेसम्म हामी पुरानो जिन्दगीमा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । अपेक्षा सन् २०२१ को मध्य नै हो । अर्को कुरा पनि सत्य हो, संसारमा महामारीका रूपमा फैलिएको रोगको भ्याक्सिन बने पनि नेपालजस्ताे गरिब देशमा त्याे भ्याक्सिन समयमै आइपुग्नै मुश्किल छ, खरिद गरेर नागरिककाे ज्यान जाेगाउने हैसियत यहाँकाे सरकारसँग छैन ।
यसको मतलब हुन सक्छ, अबको लामो समय हामी सामान्य जीवनमा फर्कन सक्दैनौँ । जीवनयापनका लागि अति आवश्यक काम (खानाको व्यवस्था, पेसागत जिन्दगी र औषधि उपचार) का क्षेत्रमा मर्यादित भएर संलग्न हुने र अन्य चासो नदिई बाँच्नको कुनै विकल्प छैन ।
हो, यस सवालमा धेरै बाधक होलान् । तर, मूल बाधाको कुरा भने हाम्रो सामाजिक संरचना नै हो । मैले बच्चादेखि देखेको समाजकै कुरा गरौँ ।
हामीकहाँ एउटा भनाइ छ, खोतल्दै जाँदा सबै काठे बाहुन एकआपसमा नातेदार हुन्छन् । यो कुरा यहाँका अन्यमा कति लागू हुन्छ, या हुँदैन थाहा छैन ।
यसबीचमा एउटा गाउँका मान्छे भेला भएर फुटबल खेलेको देखियो । चोक र पसलमा जम्मा हुनेको त कुरै नगरौँ । अझ गोदावरी क्षेत्रमा रहेका मेडसिटी र नोबेलजस्ता अस्पतालको वातावरण हेर्दा त धेरै थाहा हुन्छ । अन्य स्थानको कुरा परै जाओस् । संक्रमणका धेरै जोखिममध्ये सबैभन्दा जोखिम र डरलाग्दो भनेको सबै काठे नातेदार हुनु नै हो ।
औपचारिकतामा रमाउने काँठका बासिन्दामा लकडाउनकै समयमा पनि मामाधर, फुपूको घर, माइती, दिदीको घर, बहिनीको घरका नाममा ओहोर र दोहोर भइरहे । संस्कारका नाममा धेरै ओहोरदोहोर भए । त्यत्तिकै भेटघाटका नाममा पनि भए । मातातीर्थ औँसीको दिनमा भए ।
अनि ती सबैको वल्लो घर पल्लो घर छिमेकीसँग उत्तिकै उठबस । अनि, चिया पसलमा जम्मा भएर गफिने एउटा जमात । चोकमा जम्मा भएर गफ चुट्ने अर्को जमात । सरकारले केही उद्याेगका लागि मापदण्ड तय गरेको छ । तर, मापदण्ड लागू गराउने स्थानीय निकायमा यिनीहरू धेरै छन् ।
केही दिनअघि पर्सामा एउटा १७ जनाको पूरै परिवार संक्रमित भेटियो । सबैको परीक्षण गर्ने हो भने नेपालमा यस्ता धेरै परिवार भेटिन सक्छन् । तर, काँठमा एउटा परिवार भेटियो भने माथिको अवस्थाले भन्छ, काठमाडौंमा माहामारी सुरु भइसक्यो ।
अलि सकारात्मक सम्भावना हेर्दा त्यो अवस्था आएको छैन, यो संक्रमणको डर लामो समय रहन सक्छ, मानौँ– एकाध वर्ष पनि । यसबीचमा कुनै परको गाउँमा रहेकी छोरीलाई टीका लगाइदिँदा धर्म हुन्छ, भान्जोको उपस्थितिले आँगन पवित्र हुन्छ, दसैँ त दुर्गाकाे आशीर्वाद, नागपञ्चमीमा पुरोहित चाहिन्छलगायत कुराले हामी कता जान सक्छौँ ?
समाजमा महामारी भित्र्याउने नै हो । अनि छोरीले माइतमा र माइतीले छोरीको घरमा दुर्घटना निम्तनुको प्रमुख कारण हामी आफैँ बनिरहेका त छैनौँ ?
अझ अहिले एउटा चर्चा चलेको छ, नेपालीको इम्युनिटी पावरको । संसारका वैज्ञानिक नै चित खाइरहेको संक्रमणको बारेमा यहाँकै उपबुज्रुकले मान्छेलाई मनपरी गर्न प्रोत्साहित गरिनै रहेका छन् ।
पछिल्लो घटना क्रमले धेरै संक्रमितमा लक्षणसमेत नदेखिनाले मृत्युको सम्भावना कम हुन सक्छ । तर, फेरि सोचौँ त, त्यही रोग थेग्न सक्ने र लक्षण नै नदेखिने संक्रमितको संख्या बढ्दै गएर अस्पतालभित्र प्रवेश गर्‍यो भने के हुन्छ ? अन्य रोगको उपचार गराइरहेकामा यो महामारी फैलियो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ?
देवालीमा बहिनीको गोडा ढोग्दा, औँसीमा माइत गएर बाबुआमाको मुख हेर्दा, दसैँको बेलामा अन्यत्र गएर देवीको प्रसाद लगाउँदा कमाएको धर्मभन्दा महामारी फैलाएका कारण लाग्ने पाप कति गुणा धेरै हुन सक्छ ?
अन्य धेरै कारण हुन सक्छ महामारी फैलिने । यो महामारीको अन्त्य हुदाँसम्म हामी कोही जीवित अवश्य पनि हुन सक्छौँ । कोही नरहन पनि सक्छौँ । मृत्यु स्वाभाविक प्राकृतिक नियम हो । तर, सपनतीर्थमा ननुहाउँदा हाँसोको पात्र बनाउने, देवीलाई खुसी बनाउन बलि पूजा गर्नैपर्ने, मान्छेमान्छेबीचमा भेदभाव गर्ने र धार्मिक संस्कारको बहानामा अहिले पनि इष्टमित्रकहाँ ओहोरदोहोर गरेर महामारी फैलिनुको कारक बन्न सक्ने धेरै अनुहार उही नै हुन्, पिकेका पण्डितजी जस्तै । शायद पहिलेको भन्दा समाजको यो रङ नम्बर अझ धेरै घातक हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७, ०७:१५:००
कोरोना सङ्कट न्यूनीकरणमा सेनाको भूमिका
५ दिन थुन्न अनुमति पाएको प्रहरीले भीआइपी जुवाडेलाई राजनीतिक दवावमा आजै छोड्दै
यस्ताे छ जुवा खालबाट पक्राउ परेका अवैतनिक दूत अग्रवालकाे व्यवसायिक कनेक्सन